Sheekh Shaakir oo sheegay inuusan aqoonsanayn maamulada Galmudug iyo Hirshabeele – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Sheekh Shaakir oo sheegay inuusan aqoonsanayn maamulada Galmudug iyo Hirshabeele
Madaxweynaha maamulka Ahlu-sunna Waljameeca ee gobolada dhexe Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa shaaciyay inuusan aqoonsanayn maamulada Galmudug iyo Hirshabeele ee ka midka ah maamulada ka jira dalka Soomaaliya.
Sheekh Maxamed Shaakir ayaa ku dooday in maamulkiisa uu ka taliyo gobolada Mudug, Galgaduug iyo Hiiraan, islamarkaana ay xuduud la-leeyihiin maamulada Puntland iyo Koonfur Galbeed, isagoona dhinaca kale meesha ka saaray in maamul aan aheyn kan uu isagu madaxweynaha ka yahay uu ka taliyo gobalada dhexe.
“Maamulkeena waxaa ku mideysan islamarkaana taageersan Galmudug, Ahlu-sunna iyo Ximin Iyo Xeeb, waana maamul ay ku jiraan dhammaan beelaha dega gobolada Mudug, Galgaduud iyo Hiiraan” Sidaas waxaa yiri Sheekh Maxamed .
Dhinaca kale, Sheekh Maxamed Shaakir ayaa beeniyay wararka sheegaya inay ku biirayaan maamulka Galmudug, wuxuuna sidoo kale meesha ka saaray in hubka ay heystaan ku wareejin doonaan dowladda federaalka Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee, arrintan ayaa meesha ka saareysa rajadii laga qabay in maamulka Ahlu-suna Waljameeca uu ku biiro maamulka Galmudug, kana qeyb galo doorashada madaxweynaha oo 21-ka bishaan ka dhici doonto magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud.